Football Food System ဖိုရမ်မှ ပညာရှင်များက ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းတွင် ခေတ်မီပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်နေကြောင်း - Pandaily
Football Food System ဖိုရမ်မှ ပညာရှင်များက ပြောကြားရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းများအား ခေတ်မီအောင် ကြိုးပမ်းရာတွင် ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တရုတျစိုကျပြိုးရေးသိပ်ပံပါမောက်ခ ဂြေးပငျးကလညျး ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး တရုတျနိုငျငံသညျ ကုနျသှယျမှုတှငျ ၃ ရာခိုငျနှုနျးအောကျသာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍမှ စားသောကျကုနျ လုပျငနျးဆိုငျရာ ပညာရှငျမြားကို ပွောကွားခဲ့သညျ။ သူက အဓိကရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ဈေးကှကျရှာဖှရေေး အပလီကေးရှငျးက ပိုမိုစောစီးစှာ အရောငျးအဝယျဖွဈနတေဲ့ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ၊ စားသောကျကုနျနညျးပညာနဲ့ ဝနျဆောငျမှုကဏ်ဍတှေ ဖွဈပါတယျ။
သူက ငှရေေးကွေးရေး ရောနှောသုံးစှဲတာဟာ စီးပှားရေးမွို့တျောကို ဆှဲဆောငျတဲ့ နညျးလမျးတဈခုဖွဈပွီး ရရှေညျတညျတံ့ခိုငျမွဲတဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုအတှကျ အထောကျအကူပွုတဲ့ စီမံကိနျးတဈခုဖွဈပွီး ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှအေတှကျ ငှကွေေးပွနျပေးဖို့ ကမ်ဘာ့လမျးကွောငျးသဈတဈခု ကို တရုတျကမွှငျ့တငျပေးနိုငျတယျလို့ ပွောပါတယျ။ သူ့ခန့်မှန်းချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ လူမှုရေး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်း ၉၃၀ ဒသမ ၂၀၈၀ သန်း တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘ကြှနျတျောတို့ဟာ ကံကောငျးတဲ့ဘဝတဈခုကို ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ ဆနျးသဈတီထှငျမှုတှမြေားစှာလုပျဆောငျခဲ့ပွီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဘဝကိုပွောငျးလဲစခေဲ့ပါတယျ’ လို့ Jia က ခေါငျးစဉျတပျထားတဲ့ “တရုတျရဲ့ရရှေညျတညျတံ့တဲ့ စပါးမြိုးစစေ့နဈကိုဘယျလိုမြိုးကှဲစခေဲ့သလဲ” လို့ အဖှဲ့ရဲ့ဆှေးနှေးမှုမှာ ပွောခဲ့ပါတယျ။ “ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စိုက်ပျိုးချိန်ကို ကျော်လွန်ပြီး တီထွင်ရတာမို့ အတော်လေး လွယ်ကူပေမယ့် တီထွင်မှုပိုင်းမှာတော့ ရှင်သန်ဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့် အစီအစဉ်ဆွဲဖို့ အရေးကြီးပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ပါမောက္ခ ဂျပ်ပင်းသည် Food Food System ကို အများကြီး တိုက်ဖျက်သွားမည်ဟု ဖိုရမ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းတစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြသည်။ (Source: Food System Forum)
မေလအတွင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တရုတ်၏ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ရပ်အရ လူမှုရေးကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အားပေးရန် လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် ကျေးလက်ဒေသကဏ္ဍ ၁၃ ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကျေးလက်စီးပွားရေးအား မြှင့်တင်ရန်နှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ခေတ်မီတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်။ ခတျေမီစိုကျပြိုးမှု အပါအဝငျ လယျယာထှကျကုနျမြား ဖွနျ့ဖွူးခွငျး၊ စိုကျပြိုးရေး နညျးပညာမြား ဆနျးသဈတီထှငျခွငျး၊ ပညာ၊ စိုကျပြိုးရေးပညာ၊ စိုကျပြိုးရေးပညာ၊ စိုကျပြိုးရေးပညာ၊ မှေးမွူရေး၊ ကြေးလကျအခွခေံ အဆောကျအအုံမြား စသညျတို့ ပါဝငျသညျ။
နန်ကျင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဇူဂျင်က တရုတ်အစိုးရ၏ ဆယ့်လေးငါးနှစ် စီမံကိန်းအား ဆွေးနွေးရာတွင် ဗဟိုအစိုးရ၏ စီးပွားရေးမဟာစီမံကိန်းဖြစ်သည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ ကာလအတွင်းမှာပင် ဆွေးနွေးမည်ဟု ဆိုသည်။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ ခတျေမီတိုးတကျရေးကို အလေးပေးဆောငျရှကျသညျ့ ကဏ်ဍသဈတခုဖွဈသညျ့ ခိုငျမြိုးစိတျမြား တညျဆောကျရေးနှငျ့ အဆငျ့မွှငျ့တငျ ရေးတို့အတှကျ ကှငျးဆကျသိုလှောငျရေးစကျရုံမြား တညျဆောကျမညျ ဖွဈသညျ။
ပါမောက္ခ ဇူဂျင်က Food Food System ကို အများကြီး တိုက်ဖျက်ဖို့ ဖိုရမ်မှာ တင်ပြခဲ့တာပါ။ (Source: Food System Forum)
တရုတျနိုငျငံ၏ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍကို ခတျေမီဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျသော ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံမြားနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားသို့ အခှငျ့အလမျးမြား ပို့ဆောငျပေးခဲ့သညျ။ ဥပမာအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာနိုင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရည်မှန်းချက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအတွက် တရုတ်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်လည်း အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် စားသောက်ကုန်များ ဈေးကွက်ကြီးမားစွာ ရောင်းချနိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း မာဇူက ပြောသည်။
တရုတျစိုကျပြိုးရေးတက်ကသိုလျ ပါမောက်ခ Shin Gen က သညျအဖှဲ့မှာ အဖှဲ့ဝငျဟောငျးတဈဦးနဲ့ အတူတူပဲလို့လညျး ပွောကွားခဲ့ပွီး သရဖူအသဈဟာ အဆုတျရောငျရောဂါဖွဈပှားမှုကို ပိုမိုထိခိုကျစနေိုငျတာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့အစားအစာစနဈဟာ လူသနျးပေါငျးမြားစှာအတှကျ ကနျြးမာရေးအဟာရ မလောကျငှတဲ့ အစားအစာတဈခုလို့ ဆိုပါတယျ။ ဂြူဗငျက “၂၀၂၁ ခုနှဈအတှကျ တရုတျနှငျ့ ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာ မူဝါဒ” အစီရငျခံစာပါ အကွံပွုခကျြမြားကို ပူးတှဲတငျပွခဲ့ပွီးနောကျ ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာ စနဈတှငျ ကပျရောဂါအဖွဈ သုံးသပျတငျပွခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သည်မှာ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးနှင့် အာဟာရပြည့်ဝရေးအတွက် ဦးတည်သည့် နည်းပညာများဖြစ်သည့် ဇီဝနည်းပညာများ အသုံးပြုပြီး မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အာဟာရမြင့်မားသည့် သီးနှံမျိုးစိတ်နှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့် နည်းပညာများကို အသုံးပြုမည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပါမောက္ခ Fan ကတော့ Food Food System အတွက် အများကြီး တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ စကားဝိုင်းမှာ မိန့်ခွန်းပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (Source: Food System Forum)
ဗနျရှောငျက “ကြှနျတျောတို့ဟာ ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှု၊ ကနျြးမာရေးကပျြတညျးမှု၊ ထောကျပံ့မှုပွတျတောကျမှုနဲ့ စီးပှားရေးတိုးတကျပွောငျးလဲမှုတို့ကို အားအငျပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ဆောငျကဉျြးပေးဖို့လိုပါတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ သူဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ ငတျမှတျခေါငျးပါးနတေဲ့ အခွအေနကေို ရညျညှနျးပါတယျ။ “ ကာကွယ်ဆေးကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြန့်ကျက်လာရင်တော့ ဒီနှစ်မကုန်ခင် ထိုးနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အနေအထားမျိုးတော့ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားမှာပါ”
“ ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစားအစာစနစ်တွေကို ဘယ်လိုပြန်ဆောက်မလဲ? ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတာထက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး. လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ကမ္ဘာမြေကြီး ကျန်းမာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပိုကောင်းအောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု ဗန်က ပြောသည်။
ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အမှုဆောင်ချုပ် ချန်လဲ့(ယာ)တို့ အများကြီးဟာ ယန်ဂျူ(ဝဲ)နဲ့အတူ Foods Foods System ကို အများကြီး ဆွေး နွေးစကားပြောကြဖို့ပါ။ (Source: Food System Forum)
ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အမှုဆောင်ချုပ် ချန် လဲ့က အစောပိုင်းမှာ Food System Forum မှာ စကားစမြည်ပြောရင်း အခုလို တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။
“ ကြှနျတျောတို့ ပွညျသူတှအေတှကျ အကြိုးရှိတဲ့ အဖွတှေကေို ဖောကျထှကျဖို့ လိုတယျထငျတယျ” လို့ သူက ပွောပါတယျ။ “ စိုက်ပျိုးရေးအစားအစာစနစ်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုးမှုကဏ္ဍကနေ ဖြန့်ဖြူး သုံးစွဲမှုအပိုင်းကို ကြည့်ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ နည်းပညာကို တကယ်ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အောင်လံ ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”
ယငျးအခကျြကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျရနျ “ကြှနျတျောတို့ အမှနျတကယျ လိုအပျတာက Stakeholder တှေ အားလုံး ပါဝငျခှငျ့ရဖို့၊ ဒီထဲမှာ ဒသေအစိုးရတှေ၊ စိုကျပြိုးရေးပညာရှငျတှနေဲ့ လယျသမားတှေ အားလုံး ပါဝငျခှငျ့ရဖို့ပါ” ဟု ဆိုသညျ။
၂၀၁၅ ခုနှဈကတညျး က စတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ သညျတိုကျပှဲဟာ စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍကို အဓိကထားလုပျဆောငျခဲ့ပွီး တောငျသူပေါငျး ၁၆ သနျးခနျ့နဲ့ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျခဲ့ပွီး လူဦးရေ သနျး ၈၂၀ ကြျောရှိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့စားသုံးသူ မွှငျ့တငျရေးကတဈဆငျ့ ရောငျးအား၊ ရောငျးအားတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့အတှကျ လယျယာထှကျကုနျ လမျးကွောငျးတှဖေောကျပွီး စိုကျပြိုးသူတှရေဲ့စားဝတျနရေေးကို တိုးတကျအောငျကူညီပေးပါတယျ။
လီကှမျယု ပွညျသူ့ရေးရာ မူဝါဒ အကယျဒမီကို လာရောကျလလေ့ာနတေဲ့ Independent Director Yeo (George Yeo) က “တရုတျမှာ အမြားကွီး တိုကျဖကျြမှုတှေ လုပျမယျဆိုရငျ လယျယာကဏ်ဍကို တိုးတကျအောငျ လုပျမယျဆိုရငျ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှေ အမြားကွီး ဖျောဆောငျပေးလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ” လို့ ပွောပါတယျ။ “ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုလည်း အဆင့်မြှင့်နိုင်ပါတယ်၊ မိမိတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို နိုင်ငံစုံက ဝယ်ယူထားတာမဟုတ်ပေမယ့် ပိုမိုထက်မြက်တဲ့ နည်းပညာတွေ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ပြည်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။